'' Xoriyaddu waa nolol , noloshuna waa xoriyad ''
Wednesday May 20, 2020 - 17:14:08 in Opinion
Xoriyaddu waa nolol , noloshuna waa xoriyad W/Q: Ahmeed Nour Guruuje
Xoriyaddu waa nolol , noloshuna waa xoriyad W/Q: Ahmeed Nour Guruuje Hargeysa(Hargeysamedia) Binu'aadamka deeqaha ugu waawayn ee Ilaahay siiyey waxaa ka midda xoriyadda , xoriyaduna waa karaamadda alle ku maamuusay dadka ee kagga fadilay noole yaal kale oo badan , kuwaasoo qaarkood aadamaha ka waawayn yihiin , ka cimri dheer yihiin qaarkoodna ka dadaal iyo shaqo badan yihiin .
Xoriyadda aynu kusoo dhaawaanee , sadex meelood ayaa laggu tilmaamaa in yihiin meelaha ugu muhiimsan xoriyada , kuwaasoo kala ah .
1- Xoriyadda Diinta , Xoriyaddu diintu waa in qofku Diintiisa Islaamka u guto waajibaadkeeda isagoo aan cidna ka cabsanayn in ay ku fara geliso , xoriyadaa macaankeedana waxaa garanaya walaalaha Uighur ee shiinuhu gumaysto , walaalaha Rohinga ee Burmi gumaysato iyo walaalaha Falastiin ee Yuhuudu gumaysto .
2- Xoriyadda hadalka . Xoriyadda hadalkuk waa in qofku fikirkiisa soo bandhigo isagoo aan cidina ku faragelinin , cidina faaf reebin , xoriyada hadalkana waxaa ka midda in qofku soo jeediyo dhaliilo dawlada loo jeediyo isagoo aan dareemayn cabsi iyo cadaadis midna .
3- Xoriyadda Socdaalka . Xoriyadda socdaalku waa in qofku dalkiisa dhexdiisa ku socdaali karro , meeshuu doono booqan karro , dalka dabadiisa u safri karro , markuu doonana uu soo noqon karro iyadoo aan cidina faragelinin .
Somaliland , bisha ramadaan ee barakaysan inagoo ku raaxaysanaya cibaada ilaahay ee aynu ku gudanayno xoriyadda eebe ina siiyey , ayaynu hadana ku raaxaysanaynaa doodaha iyo afkaaraha dadkeenu u doodayo si xoriyadda , isagoo qof waliba rayigiisa usoo bandhigaya sida uu doono isagoo aan cabsoonaynin, waxaynu haysanaa xoriyad , noloshuna waa xoriyad , Ilaahay nimcadiisa ha inoo siyaadiyo .